Rivotra angovo any Zaragoza | Green Renewable
Rivotra angovo any Zaragoza
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra manerantany. Izy io dia afaka mamokatra angovo be dia be amin'ny alàlan'ny rivotra ho fototra. Any Espana dia tsy araraotin'izy ireo ny angovo azo havaozina rehetra mety ananany, indrindra fa ny angovo entin'ny rivotra, fa mandroso tsara izy ireo. Ao Zaragoza, misy ny fiompiana rivotra Iberdrola antsoina hoe La Plana III. Ity toeram-pambolena rivotra ity dia niasa nandritra ny 20 taona mahery ary izy no zokiny indrindra any Espana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny momba azy rehetra izahay angovo avy any rivotra any Zaragoza.
1 Toeram-pambolena rivotra any La Muela
2 Zaragoza dia manangana toeram-piompiana misy rivotra
3 Aragon, ny fahaleovan-tena Espaniola fahatelo
4 Fanatsarana ny fanavaozana
Toeram-pambolena rivotra any La Muela
Ny herin'aratra dia manana herinaratra 21 megawatt ary ao amin'ny tanànan'ny La Muela, Zaragoza. Ireo angovo 21 megawatt ireo dia omena tanteraka turbinina rivotra. Toy izany ny maha-zava-dehibe an'io fiompiana rivotra io La Muela dia raisina ho toy ny tanàna ivelan'ny rivotra. Tsy fanitarana izany satria saika ny 98% n'ny angovo ampiasaina dia avy amin'ny fiompiana rivotra.
Ireny 21 megawatt ireny dia adika efa ho 950 GWh sahady, izay mamatsy ny mponina 726.000 mponina mandritra ny herintaona. Betsaka na latsaka ity ny mponina ananan'i Zaragoza, ka azo lazaina fa miaina noho ny rivotra izy ireo.
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia mitombo amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana noho ny haitao nohatsaraina sy ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny angovo. Ireny data momba ny famokarana angovo rivotra tsara any Zaragoza ireny dia vokatry ny fampiharana ireo programa voavolavola maro samihafa izay tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo amin'ny fampiasana herinaratra. Efa an-taonany no niasa ary manatsara bebe kokoa isan-taona. Iberdrola dia miandraikitra ny fanavaozana ireo milina sy fanatsarana azy hahazoana vokatra tsara kokoa.
Iberdrola dia niandraikitra ny fanatsarana ny fitantanana ny serivisy natolotry ny orinasa mpamatsy entana. Ny fikojakojana ireo hetsika ao amin'ny fiompiana rivotra dia nihatsara noho ny fiasan'ny mpiasa tsara kokoa. Izany rehetra izany dia nanjary fanatsarana ny fahombiazan'ny toeram-pambolena rivotra sy ny fahazoana fitaovana ho an'ny famatsiana angovo.
Zaragoza dia manangana toeram-piompiana misy rivotra
Raha jerena ny fahombiazan'ny toeram-piompiana rivotra ao Zaragoza, noho ny toerana misy ny jeografika sy ny fitondrana rivotra atolony ny toetrandro any Zaragoza, izany rehetra izany dia tsy maintsy avoaka hanatsarana ny famokarana angovo. Tamin'ny volana jona 2018 dia natomboka ny fananganana toeram-piompiana misy rivotra 9 hafa izay an'i Goya. Anisan'ireo toeram-piompiana misy rivotra 9 misy megavaries 300, izay mahazaka fahaiza-manao tsara amin'ny famatsiana herinaratra.
Ireo toerana hananganana ireo toeram-piompiana misy rivotra ireo Campo de Belchite, Campo de Daroca ary Campo de Cariñena. Vinavinaina ho vita amin'ny faran'ity taona ity ny asa.
Tsy tokony hijerena tsara fotsiny ny famoronana ireo toeram-piompiana rivotra ireo ho loharanon-kery vaovao azo havaozina, fa noho ny fiatraikany tsara eo amin'ny tontolo iainana. Noho ny fanamboarana ireo toeram-piompiana rivotra ireo dia azo atao ny mampihena ny famoahana CO2 isan-taona 314.000 taonina. Izy io dia manana tombony be dia be amin'ny fifantohana entona etona etona amin'ny hafanana. Arakaraka ny maha-kely ny CO2 no ampitaina amin'ny atmosfera, arakaraka ny fahombiazan'ny ady amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro.
Ho fanampin'izay dia manana tombony ara-tsosialy ihany koa izy io, nanomboka hiteraka asa mihoatra ny 1.000 mandritra ny dingan'ny fananganana ny valan-javaboary sy asa maharitra 50 eo ho eo fa rehefa mitsangana ny valan-javaboary. Ireo olona ireo dia hiandraikitra ny fikojakojana sy hahazoana antoka fa manatanteraka ny toky nomeny ny fiompiana rivotra: ny taranaka 300 megawatt.
Aragon, ny fahaleovan-tena Espaniola fahatelo
Ary ny angovo azo havaozina no ahafahana manana a fandaniam-tena angovo tsy miankina amin'ny tariby herinaratra Espaniola izay mampiasa lasantsy fosily ho azy. Ny angovo avy amin'ireto toeram-piompiana rivotra vaovao ireto sy ilay efa fantatra ao La Muela, dia hametraka an'i Aragon amin'ny laharana fahatelo amin'ny fizakantenan'ny angovo, i Castilla y León sy Galicia ihany no nandresy.
Ny famatsiam-bola amin'ny fanamboarana ireo toeram-piompiana misy rivotra ireo dia mitentina tapitrisa tapitrisa dolara ary maro ireo orinasa eo amin'ny sehatra izay manolo-tena amin'izany. Anisan'izany i Forestalia sy Grupo Jorge miavaka. Miaraka amin'ireo fiompiana rivotra ireo ny habetsaky ny angovo vokarina dia azo avo telo heny.
Tamin'ny varotra angovo an'ny fanjakana teo aloha, i Zaragoza no teo an-tampon'ny lafiny fisian'ny loharanon-karena maimaimpoana, ny rivotra. Ny angon-drakitra voaangona tamin'ny 31 Janoary tamin'ny taon-dasa dia nilaza fa Aragon no fahaleovan-tenan'ny taranaka fahadimy eran'i Espana. Tamin'izany fotoana izany dia nanana 1.829 megawatt nefa tsy nisy ny fampandrosoana ireo valan-javaboary vaovao. Rehefa vita ny toeram-piompiana rivotra ary apetraka hanana herinaratra 5.917 XNUMX megawatt izany, izay hampisondrotra ny fahaizany amin'ny fizakan-tena angovo.
Na izany aza, na dia amin'ny fananganana ireo toeram-piompiana rivotra vaovao ireo aza dia hahavita mihoatra ny mpitondra amin'ity angovo azo havaozina any Espana ity, Castilla y León. Ity vondrom-piarahamonina mizaka tena ity dia manana fahefana 8.027 MW, betsaka lavitra noho izay irin'i Aragon. Amin'ny laharana faharoa dia manana an'i Galicia isika, izay tsy ho laharana faharoa mandritra ny fotoana maharitra, satria manana fahefana 6.039 MW izany. Ity dia kely fotsiny noho ny vola ho azon'i Aragon ary tsy fantatsika raha hanatsara ny fahafaha-manana sy ny fahaizan'ny teknolojia hiteraka angovo bebe kokoa io avy eo.
Fanatsarana ny fanavaozana
Raha toa ka mahomby daholo ireo turbine rivotra izay antenaina haorina ary miasa avokoa ireo panneaux photovoltaic sy ireo miandry hatsangana, Aragon dia afaka mitombo hatramin'ny 58% amin'ny angovo azo havaozina. Famokarana manan-tantara izay afaka manatsara ny satan'ny angovo eo an-toerana, ankoatry ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Mihoatra ny 7.000 tapitrisa euro ny fampiasam-bola amin'ireo sehatr'asa azo havaozina rehetra ireo.
Araka ny hitanao, ny angovo azo havaozina dia miditra tsikelikely amin'ny sehatry ny angovo Espaniôla ary manohy miakatra i Zaragoza. Manantena aho fa ny tanàna hafa dia hanaraka ohatra iray ary handroso bebe kokoa amin'ity sehatra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Rivotra angovo any Zaragoza
Rehefa ovaina ny fotoana